Myanmar Local News: တပ်မတော်ဟာ တကယ်ပဲ သတ္တိမရှိဘူးလား ?
လူထု့ခေါင်းဆောင် အမည်ခံ အတိုက်ခံပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုကြည် အနေနဲ့ ...
" တပ်မတော်ဟာ တိုက်ရဲခိုက်ရဲမှ သတ္တိရှိတာ မဟုတ်ဘူး ၊ အခြေခံ ဥပေဒကို သတ္တိရှိရှိပြင်ရဲရမယ် ၊ တပ်မတော်လုပ်ပြီး သတ္တိမရှိရင် နိုင်ငံကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ။ "
သမိုင်း ၁ လျှောက် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က နိုင်ငံအနေနဲ့ စီးပွါးရေးတွေ ပိတ်လို့ လမ်းပျောက် နေချိန်မှာ တပ်မတော် တကယ် သတ္တိမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် .... ?
ထိုကာလတွေ မတိုင်မှီ တရုတ်ဖြူကျူးကျော်ရေးကို တပ်မတော်အနေနဲ့ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး မခုခံဘူးဆိုရင် ... ?
တိုင်းရင်းသားတွေထဲက ၁ ချို့သောသူတို့ လက်နက်ကိုင် မိမိ လူမျိုးတည်းသာဟုသော အစွဲတွေနဲ့ သွေးကွဲ မှု့ကို လက်ပိုက်မကြည့်ပဲ အမုန်းခံပြီး ပြည်ထောင်စု အပြိုကွဲရေးအတွက် သတ္တိရှိရှိ မထိန်းချုပ်ဘူးဆိုရင်.. ?
အန်တီကို အကြံပေးပါရစေ ...... ။
အခြေခံဥပဒေမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မညီညွတ်တာကို တပ်မတော်က ပြင်ဆင်ဖို့ သဘောတူညီချင် တူညီလိမ့်မယ် ၊ သို့သော် တိုင်းတပါးက ၀င်ရောက်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ၁ ခု အထူးသဖြင့် ၅၉ ( စ ) ကို တော့ လုံးဝ ( လုံးဝ ) ပြင်မည် မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ .... ။
ဒ့ါကြောင့် မလို့ အန်တီအနေနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါနဲ့ .... ။ လူ့အခွင့်အရေး လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာနဲ့ ချီပြီး အလုပ်လုပ်ပါ ၊ နိုင်ငံရေးမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ရှိလားမရှိလား အန်တီ အသိဆုံးပါ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ စုစည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုပါ ၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လာနေချင်တဲ့သူတွေနေပြီး စုစည်းတည်ထောင်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အန်တီ သတိရနေပေးပါ ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဟာ တိုင်းတပါးသား မပါသော ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အန်တီ မေ့လျှော့ နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ......
အန်တီရဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် နာမည်ကို ဖျက်ရာကြတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ... ။
မသိလို့ မေးစမ်းပါရစေဗျာ ...... ။
ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားကို ဆန့်ကျင်ရင် ပြည်သူ့ တပ်မတော် မဟုတ်ဘူးတဲ့ ..... ။
ဒါဆို လူပေါင်းများစွာ လက်ညိုးညွှန်ရာ လိုက်နာဖို့ တပ်မတော်ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပေးထားတာလား ? အများ အကျိုးကို ထမ်းရွက်ဖို့ ဖွဲစည်းထားတဲ့ တပ်မတော်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတာ အပြစ် ၁ ခုလား ? ၁ ခုခု ဖြစ်တိုင်း ဒီ တပ်မတော်ကြီးကို မတပါဘူးလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံရဲပြီလား ?
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ဆိုတာ အမှားအမှန် မခွဲခြားပဲ ခိုင်းတိုင်း လုပ်တဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်ဘူး ။
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ဆိုတာ ၁ ဦး ၁ ယောက်အတွက် ရှင်သန်နေတာ မဟုတ်ဘူး ။
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုကို ပြိုပျက်မသွားဖို့ စည်းနှောင်ထားတဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့ ကြိုးတွေပဲ ....
FROM-PHAY SIT GYI
-အမျိုးမစောင့်တဲ့ အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက် ကုလားမယား ဒေါ်စုကြည်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဘို့ အမြန်လိုအပ်နေပြီလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်၊-အစမ်းသဘောနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ထဲမှာ မျိုးချစ်လူငယ်တွေ ဖွဲ့စည်းစည်းပြီးတော့..စုပေါင်းဆန္ဒပြကြည့်စေချင်တယ်..မျိုးချစ်လူငယ်များအမည်နဲ့ ဖေ့ဘုတ်ထဲမှာ အစလုပ်ပေးလိုက်ကြပါဗျာ..အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက် ကုလားမယား ဒေါ်စုကြည်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဘို့ ကျနော်တို့တတွေ စုပေါင်းထောက်ခံပေးပါမယ်..
လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးချစ်တဲံ့လူငယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်
သိပ်မှန်ပါတယ် တပ်မတော်ကပြည်သူအတွက်အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်နေတာပါ ကုလားတွေကို အရမ်းမုန်းပါတယ် ကုလားတွေဘက်ကနေပေးတဲ့ဒေါ်စုကိုလဲအံသြပါတယ်ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းကိုသွေးမခွဲပါနဲ့လို့ဗမာပြည်သူတွေကအမိအဖတွေပါဗမာစစ်သားတွေကသားတွေပါ မကြည်ဖြူရင်လဲနေပါအမေအဖေတွေနဲ့သားတွေကိတော့ရန်မတိုက်ပေးပါနဲ့နောက်ဆုံးကျမြွှေပါလည်းဆုံးသားလည်းဆုံးရမယ့်အဖြစ်ကိုတော့မခံနိုင်လို့ပါ